धेरै एयरफोनको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? सावधान ! हुनसक्छ यस्ता खतरा « Kakharaa
आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै विभिन्न ग्याजेटको प्रयोग पनि बढ्दो छ । जसमध्ये एयरफोन पनि एक हो । प्रायः युवा तथा किशोर उमेरका व्यक्तिको अधिकांश समय कानमा एयरफोन हुने गर्दछ । यो एक प्रकारले फेसन झै बनेको छ । तर यही फेसन समस्या बन्न सक्छ ।
विभिन्न अनुसन्धान अनुसार ठूलो आवाजका साथ एयरफोन सुन्दा यसले कानको पर्दामा नकरात्मक असर पार्न सक्छ । लामो समयसम्म एयरफोन प्रयोग गर्दा सुन्न सक्ने क्षमतामा कमी आउनुका साथै कान सुन्निन पनि सक्छ ।
एयरफोनको प्रयोगले कान भित्र ब्याक्टेरियाको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । एयरफोन प्रयोग गर्दा त्यसबाट विभिन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगहरु निस्कन्छन्, जसले दिमागमा नोक्सान पुर्याउन सक्छ । अझ कान भित्रै पस्ने एयरफोनले दिमागमा समेत हानी पार्न सक्छ ।
ध्यान रहोस्, संगित सुन्दा ठिक्क आवाजमा सुन्नु पर्दछ । साथै निश्चित समयपछि कानलाई विश्राम दिनुपर्छ । ९० डेसिबलमा कुनै ध्वनी प्रतिदिन ४ देखि ५ घण्टासम्म सुनियो भने कानमा नोक्सान हुनसक्छ । एयरफोनमा जमेको धूलोका कारण कानमा इन्फेक्सन पनि हुन सक्छ । साथै आवाज नसुन्ने, दिमागमा असर तथा कान दुख्ने समस्या पनि बढ्दै जान्छ ।
महिनावारीमा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी ७ काम
एजेन्सी । हरेक महिना महिलालाई महिनावारी हुन्छ । यो एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर,
किन टुटिरहन्छ धनीहरुको सम्बन्ध ? संसारकै धनी एलन मस्कको पनि प्रेमिकासँग टुट्यो सम्बन्ध
एजेन्सी । संसारकै धनी मध्येका एक एलन मस्क र उनकी प्रेमिका ग्राइम्सबीचको सम्बन्ध टुटेको छ
श्रीमान श्रीमतीबीच खटपट बढ्यो ? धार्मिक उपाय अपनाउने कि !
एजेन्सी । श्रीमान् श्रीमतीबीच सानोतिनो विवाद हुनु सामान्य कुरा हो । तर, बारम्बार विनाकारण यस्ता
किन खाने पोलेको मकै ? यस्ता छन् ९ फाइदा
एजेन्सी । पोलेको मकै, त्यसमाथि नुन र हरियो खुर्सानी पिसेर त्यसमा दलेर खादाँको यसको स्वाद